मेरा मनका माओवादी-२ – United We Blog
मेरा मनका माओवादी-२
हो, हामी अलि शहरीया भेषभुषामा देखिने मान्छे, अझ बिशेष केटी मान्छे त राजनितीका कुराबाट अनभिज्ञ हुन्छौ भनेर सोचीन्छ । उसले पनि त्यहि सोचेर सम्झायो ।
स्कुलको पर्खालमा लेखिएका माओवादी नारा । सब‍ै तस्बिर-माया यो ब्लगको अधिल्लो भाग यहाँ छ ।
पहिला जाँदा हाँसेर बोलेका गाउँलेहरू यसपाला अलि शसंकित भएर कुरा गर्थे । मलाई एक्लै देखेर होला । पहिलो चोटी त घुम्न आइ दोस्रो चोटी के गर्न आइ भनेर पनि होला । मेरो पेट खराब भयो त्यसैले म गएको भोलीपल्ट सुतेर बसीराखे । पर्सीपल्ट पनि म सुतिराखेको थिए, धनले कानमा नै आएर भनी, ‘नाना (दिदी) तपाइलाई त्यो गौरव भन्ने माओवादीले बोलाएको छ । स्कुलको डाँडामा जानुस् रे !’
म उठे र मुख धोएर गए । उसलाई मैले परैबाट देखे । उसले कम्ब्याक्ट ड्रेस लगाएको थिएन तर बन्दुक भने बोकीरहेको थियो । स्कुल विदा भै सकेकोले सुनसान थियो । मान्छे ओहोरदोहोर हुने नै बाटो हो त्यो तर फाट्टफुट्टमात्र ।
‘नमस्ते !’ मैले हात जोडे । चिठी पठाएपछिको भेट भएकाले अलि अप्ठेरो लागिरहेको थियो ।
‘हामी नमस्ते गर्दैनौ, हामी त हात मिलाउँछौ ,’ उसले हात दियो ।
‘तर म नमस्ते नै गर्छु,’ मैले हात जोडी नै रहे ।
‘ठिक छ, म फर्काउँदिन ।’
‘तर हिजो राती त धनसंग टाउको दख्यो भनेको सुनेको थिए ।’
‘चियो गर्दैथ्यौ तिमी ?’ मैले पनि तिमी नै भने ।
‘हैन त्यहि बाटो भएर जादै थिए, सुनेको ।’
म बसेको घर सडकसंग जोडिएको छ ।
‘त्यो मेरो बोली नहुन पनि सक्थ्यो नी ! कसरी चिन्यौ ?’
‘थाहा पाए ।’
‘लौ लौ !!’
हामी बाटोतिर ढाड फर्काएर बसेका थियौ । तल बाख्रा चराइरहेका केटाकेटी देखिन्थे । मैले उसको आँखामा हेरीन । झट्ट सुरूमा हेर्दा उसको अनुहार सफा भने देखिएको थियो ।
‘तिमी मलाई सहयोग गर्र्छौ ?’ मैले भने ।
‘कस्तो सहयोग ?’
‘म तिम्रा अरू साथीसंग पनि कुरा गर्न चाहन्छु ।’
‘यो मबाट हुदैन ।’
‘उनीहरू नयाँ मान्छेसंग कुरा गर्दैनन् ।’
‘तर तिमी त मलाई चिन्छौ नि हैन ?’
‘मैले चिनेर हुदैन । तिमीसंग कुरा गर्नुलाई साथीहरूले अर्थपुर्ण तरीकाले हेरेका छन् ।’
‘अर्थपुर्ण ? कस्तो अर्थपुर्ण ?’ मैले कुरा बुझिन ।
‘तिनीहरू तिमी मेरो प्रेमिका हौ भन्ठान्छन् ।’
‘के ?’ जील्लीएर मेरो आँखाको आयतन बढ्यो । ‘हा हा हा …….. हो त ?’ मैले हाँसेर आफुलाई सामान्य बनाए ।
‘हैन !’ उसले मतिर हेरेरै भन्यो ।
‘त्यसो भए यस्तो कुरा छाड्देउ । यस्तो सानो कुरामा अल्झिनेले पनि क्रान्ति गर्छु भनेर हुन्छ ?’
‘तिमी तगडा कुरा गर्र्छौ ।’
‘तर तिमी त मलाइ शहरी बेकम्मा केटी भन्ठान्छौ होइन र ?’ बल्ल मैले मौका पाएको थिए ।
‘ठान्थे तर अब त्यस्तो सोच्दिन ।’
‘किन त्यस्तो सोच्यौ त ?’
‘तिम्रो झोलामा कुरकुरे थियो ।’
‘के भयो त कुरकुरे खाने सबै बेकम्मा हुन्छन् त ?’
‘हुन्न रहेछन् । हामीले बिहानदेखि केही खाएका थिएनौ त्यसैले अलि रीस उठिरहेको थियो ।’
म एकछिन चुप लागे । म कुरा गर्दा उतिर हेर्दिन थे र ऊ पनि सायद हेर्दैनथ्यो ।
‘तिमी राम्रो लेख्नेरहेछ्यौ ।’
‘मलाई त्यसले प्रभाव पार्यो । अनि मैले तिमीलाई त्यस्तो भन्नु हुदैन थियो जस्तो लाग्यो ।’
एकछिन फेरी कोही बोलेन ।
‘के तिमी मलाई साच्चै सहयोग गर्दैनौ ?’
‘तिमीले सोचेजस्तो सजिलो छैन नी ! यी साथीहरूले कत्रो त्याग गरेका छन् । भिडन्तबाट बचेर आएका छन् ।’
‘हो ? यो त झन् रोमाञ्चकारी हुन्छ ।’ मैले आँखा चम्काएर बोले ।
‘यो त शहरकी बेकम्मा केटी बोले झै भयो । युद्ध भयानक कुरा हो । आफ्नै साथीको लास कुल्चेर अगाडी बढ्नु के सानो कुरा हो ?’
आफ्नो कुराको अर्थ अलि अर्कै लागेपछि म गम्भिर भए र भने, ‘डर लाग्छ युद्धदेखि ? लाग्नेले किन लड्नु ?’
‘लाग्दैन तर तिमीहरू कति हल्कासंग लिन्छौ ।’
‘हल्कासंग ? हामी त झन डराउँछौ । हामीसंग कति धेरै प्रश्न हुन्छन् ।’
एकपटक घर जाँदा चितवनको जुगेडीमा भएको भिडन्तको पनि प्रत्यक्षदर्शी बनियो । गोली चलेको सुनियो । परीवारमा फुपाज्यू सेनामा हुनुहुन्छ । सेनाकाबारेमा यसैपनि धेरै कुरा थाहा भइराखेको हुन्थ्यो ।
‘कस्तो प्रश्न सोध्न मन लाग्छ ?’ उसले जान्न चाह्यो ।
‘के तिमी जवाफ दिन्छौ ?’
‘सोध न !’
‘जवाफ दिन्छौ ?’
‘दिन्न । तिमी कस्तो प्रश्न गर्न चाहन्छौ, त्यो मात्र जान्न चाहन्छु ।’
‘ए बाठो कुरा ! म सोध्दिन ।’
ऊ चुप लाग्यो ।
मैले उसकै बारेमा त सोधेको थिइन । मलाई उसको बारेमा जान्नु पनि केही थिएन ।
‘झोलामा के छ ?’ कुरा अन्तै मोडियो । फोटो खिच्ने देला कि, र केही लेख्नुपर्ला कि भनेर मैले झोला बोकीवरी गएको थिए । उसले झोला हेर्यो । झोलामा एउटा पर्स थियो ।
‘यो पर्स कसको लागि ?’, उसले पर्स हातमा लिदै सोध्यो । पर्स खाली थियो ।
‘कसैको लागि हैन’
‘मलाई चाहिएको छ ।’
मैले लिए हुन्छको संकेत गर्दै टाउको हल्लाए । उसले आफ्नो परानो पर्सका सबै सामान खाली गर्यो र मैले दिएको पर्समा राख्यो ।
हामीले थुप्रै कुरा गर्यौ । कतिकुराहरू माओवादीका बारेमा, कति मेरो बारेमा तर बिचमा कनै पनि बेला पनि मैले उसको घर कहाँ, उसका परिवारको बारेमा, केही पनि सोधिन । मलाई ऊ कसरी माओवादी भयो भन्ने चाँहि जान्ने इच्क्षा थियो । प्रायसो माओवादी पार्टीमा आफ्नो घरबार केही नभनी हिड्नेसंग केही बिशेष कारण हन्छ । अझ युवाहरू के कारणले प्रभावित हन्छन् भन्ने त मलाई जान्ने इच्छा थियो तर सोधिहाल्न म मौकाको पर्खाइमा थिए ।
हामीले केही ठट्टा पनि गर्यौ तर हामी दुबै अनुशासित थियौ । दुबै ठट्टा गर्न अभ्यस्त नभएका मान्छेहरू थियौ । ऊ त त्यसै त्यसै रिसाएको झै लाग्थ्यो ।
‘तिमीले के पढिर’को रे ?’, उसले सोध्यो ।
‘कुन कुन विषय ?’
‘सोसीयोलोजी र पपुलेसन ।’
‘अंग्रजी किन नपढेको ?’
‘त्यसै, तिमीले कति पढेका छौ ?’
‘मैले पनि तिमी पढेकै कलेज पढेको । बी.ए. पास गरेको छ ।’
‘तिमीले अंग्रजी पढको हो ?’
‘हो । जे पढे पनि उही हो ।’
‘के गर्र्छौ यो पढेर ?’
‘जागिर गर्छु ।’
मेरो उत्तर सोझो थियो । ऊ हाँस्यो, मलाई पनि थाहा छ जागिर पाउन मैले जवाफ दिए जस्तो सोझो छैन तर पनि मैले केही जवाफ दिनका लागि त्यसो भनेको थिए ।
‘तिमीलाई थाहा छ, काठमाडौंमा मेरो घरमा डेरा बस्ने प्रायसो केटाहरू गाउँबाट पढ्न र पढेपछि जागिर खान आउँथे । तर तिनीहरूमध्ये थोरै मात्रले जागिर पाउँथे । बाँकी सब गाउँमा गएर झगडालु पति र गैर्ह जिम्मेवार बाउ बन्थे । यस्तो वास्तविकता तिमीले बुझ्या छौ ?’
मैले कनै प्रतिक्रिया दिइन । मैले उतिर एककोहोरो हेरीरहे ।
‘हेर मेरो घर काठमाडौंमा छ, बाउआमाको एक्लो छोरा, जे पनि पुर्याउँछन् तर के मलाई मात्र पुगेर हन्छ ? मैले मात्र खाएर हन्छ ? कहिले हामी सबै मान्छेको लागि सुरक्षित जीवन बनाउने ? तिमी यीनै नेता र राजाले शुसाशन गर्छन भन्ने ठान्छौ ? मेरो लागि मेरो जीवन भन्दा महत्वपुर्ण कुरा मेरो राष्ट्र हो । हामीले परिवर्तनका लागि प्रतिबद्ध हनपर्छ ।’
उसले आफ्ना बारेमा भन्दा म चप लागिरहे । मैले उसंग करा गरेपछि जान्न चाहेको सबैभन्दा महत्वपुर्ण कुरा थियो यो ।
‘तिमी भन्छौ, मान्छे मार्र्छौ तिमीहरू, तर हामी क्रान्ति गरीरहेका छौ, आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि हैन सम्पुर्ण राष्ट्रका लागि । क्रान्तिमा यस्तो हुन्छ । हामी पनि त मर्र्छौ । तिमीहरूलाई हामी मरेको कराले कुनै महत्व राख्दैन है ? हामीले पनि परिवार गुमाएका हुन्छौ । हामीमा पनि भावना हन्छ तर हामीले सबैकरा राष्ट्रका लागि त्याग गरेका हन्छौ । परिवर्तनको लागि हामी प्रतिबद्ध छौ । सबैले खान पाउनुपर्छ, लाउन पाउनुपर्छ, सबैको जीवन राम्रो हनपर्छ । तिमी पनि यस्तो भन्छौ नि हैन र ?’
मैले सहमतिको मन्टो हल्लाए ।
‘हो तर यो सबको लागि हाम्रो सीस्टम राम्रो हनपर्छ । सीस्टम परिवर्तन यत्तिकै हदैन । रत्नपार्कमा जीन्दावाद वा मर्दावाद भनेर हदैन बझ्यौ ?’
उसले मलाई केटाकेटीलाई झै सम्झायो । उसको घरमा डेरा गरी बसेका दोलखाका दइ केटाले उसको मनमा यी कराहरू हालेका रहेछन् । ‘दइ वर्षभयो म घर नगएको’, उसले भन्यो ।
अरू पनि कुराहरूले उसले मलाई बुझाउन खोज्यो । मैले सब बुझेको थिए । ऊ माओवाद बुझाइको शरूवात थिएन न त मैले भेटेको पहिलो माओवादी नै थियो ।
>>>मायालाई mayablog@gmail.com मा सम्पर्क गर्न सकिन्छ । मायाको अघिल्लो ब्लग यहाँ छ । यो लेखको अधिल्लो भाग यहाँ छ ।
20 thoughts on “मेरा मनका माओवादी-२”
April 3, 2014 at 04:06